Sweden oo joojisay Musaafurinta Qaxootiga Dal kamid ah Qaarada Africa
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo joojisay Musaafurinta Qaxootiga Dal kamid ah Qaarada Africa
November 17, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
Hay’adda Socdaalka Sweden ayaa go’aan ka gaartay inay joojiso dib u celinta dadka Itoobiyaanka ah ee magangelyo-doonka ah ee loo diiday dalka Itoobiya.
Hay’adda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go’aankeeda uu quseeyo muddo ku meel gaar ah.
Waxay intaas ku dartay in xogta ay hayso ay muujinayso in dadka asal ahaan ka soo jeeda Tigreega ay dhibaatooyin iyo tacadiyo kala kulmaan dalka.
Mawqif cusub oo dhanka sharciga ah, ayay hay’addu ku xaqiijisay in xaaladda nabad-gelyo ee Itoobiya ay sii xumaanayso, lagana walaacsan yahay oo aan la saadaalin karin.
Hay’addu waxay go’aankeeda ku cadaysay inay awoodi wayday inay qiimeyso tirada dadka halista gelin kara, 400 oo kiis ayay swden heysaa.
“ Hay’adda laanta socdaalka ma ilaaliso tirakoobka qowmiyadaha ay ka soo jeedaan dadka magangalyo doonka ah, marka cidda go’aankaasi saameyneyso waa arrin u baahan in baaritaan lagu sameeyo kiis kasta oo gaar ah” ayuu yiri Karl Bexelius oo ah sarkaal ka tirsan hey’adda socdaalka . shir jaraa’id oo uu maanta qabtay.
walal waad mahaddanathy 400kiis ma dadka go aanka laga gaaroo sweden joogaa mise kuwan wali laga gaarin ii bayaani wll